यी रहेछन् रुपमतीकाे बलात्कारपछि हत्या गर्ने पापी ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > यी रहेछन् रुपमतीकाे बलात्कारपछि हत्या गर्ने पापी !
विराटनगर / विराटनगर महानगरपालिका–८ बलुवाईकी ११ वर्षीया बालिका गुडिया भनिने रुपमती दासको हत्या लागुऔषधको दुव्र्यसनमा फसेका दुई युवाले मिलेर गरेको खुलासा भएको छ । रुपमतीकै छिमेकी रहेका दुवै जनाले लागुऔषधको नसामा बलात्कारपछि हत्या गरेको पुष्टि प्रहरी अनुसन्धानले गरेको हो । दुबै जनालाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । विराटनगर ८ का २५ वर्षीय आवत अन्सारी र १८ वर्षीय चन्दु महतोले मिलेमतो गरेर बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेको खुलेको उच्च प्रहरी स्रोतले जनायो ।
घटना भएको एक सातापछि प्रहरीले वास्तविकता र दोषी पत्ता लगाउन सक्दा रुमपतीका परिवारले थोरै भए पनि राहतको महसुस गर्न पाएका छन् । अन्सारी र महतोलाई प्रहरीले घटना भए यता अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । प्रमाण जुटाउन नसक्दा घटनामा उनीहरुको संलग्नता हो की हैन भन्ने दोधारमा प्रहरी परिरहेको थियो । तर पक्राउ परेका दुबै जनाले घटनामा संलग्नता स्वीकार गरिसकेको प्रहरी उच्च स्रोतले जनायो । यस घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले ११ जनामाथि सोधपुछ गरेको थियो ।
पक्राउ परेकाहरु लामो समयदेखि लागुऔषधको दुव्र्यसनमा रहेको बताइएको छ । घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीका अनुसार लागुऔषधकै नसामा उनीहरुले बलात्कारपछि बालिका रुपमतीको हत्या गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी मनोजकुमार केसीले घटनालाई अझै पनि घटनाको निचोडमा पुग्न केही प्रमाण संकलन गर्ने काम भइरहेको बताए । प्रहरीले अहोरात्र खटिएर गरेको मेहनत अनुसार राम्रो उपलब्धी हाँसिल हुँदै गएको उनको भनाइ छ । केसीले घटना जघन्य प्रकृतिको भएकाले पनि प्रमाणसंग जोडेर हेर्नु पर्ने भएकाले अनुसन्धानमा समय लागेको बताए । उनले भने, ‘चाँडै हामी सबै कुराको निस्कर्षमा पुगेर घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउने प्रयास गर्ने छौं ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरको संयुक्त टोलीले घटनाको अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले घटनाको अनुसन्धान गर्न आवश्यक पर्ने धेरै प्रमाणहरु संकलनमै समय धेरै लगाउनु परेको बताए । उनले प्रमाण संकलनमा समस्या हुँदा घटनाका दोषी पत्ता लाग्न समय लागेको बताए ।
मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–८ र कटहरी गाउँपालिका–२ को सीमानामा रहेको सिंघिया खोलामा गत आइतबार दिउँसो (माघ १३ गते) नाँगो अवस्थामा रुपमतीको शव फेला परेको थियो । छिमेकी मोहम्मद नहिमकहाँ टिभी हेर्न भनेर आमा मुन्नीदेवीसंग शनिबार राति लगभग ८ बजे विदा मागेर हिंडेकी रुपमतीको शव हत्या गरेर फ्यालेको अवस्थामा बगिरहेको खोलाको पानी भित्र भोलीपल्ट फेला परेको हो । त्यसअघि नै नहिमकहाँ टिभी हेरिरहेका बुवा रामप्रसाद घर फर्किएपछि मात्रै आमासंग विदा मागेर हिंडेकी छोरी टिभी हेर्न नगएको खुलेको थियो ।
अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार सुरुमा मुख बन्द गरेर उनीहरुले घरदेखि अलि परेको खोलाको डिस्कोको चउरमा पु¥याएको खुलेको छ । त्यसपछि पालै पालो बालात्कार गरेको खुलेको छ । बालिकाले चिच्याउन र कराउन खोजेपछि अन्सारी र महतोले मुख र घाँटी थिचेर पालै पालो बलात्कार गरेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । मुख र घाँटी थिचेर बलात्कार गरेकै कारण रुपमतीको मृत्यु भएको बताइएको छ । प्रहरीका अुनसार बलात्कार गरिरहेकै बेला त्यहीं छेउमा रहेको बाटो हुँदै राति एक वृद्धा हिंडेको देखेपछि ती युवाले रुपमतीलाई बगिरहेको खोलाको पानी भित्र फ्यालेर हिंडेको खुलेको छ ।
त्यस अघि अन्सारी र महतोले रुपमतीकै एक आफन्त युवतीलाई बलात्कारको योजना बनाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । त्यो प्रयास असफल बन्यो । युवतीलाई निशाना बनाउनु अघि पनि एक महिलालाई अन्सारीले पाउरोटीमा लागुऔषध नाईट्रोसन मिसाएर खुवाएर बलात्कारको योजना बनाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । कहिल्यै खानेकुरा नदिने युवाले पाउरोटी दिएपछि ती महिलाले खान मानिन् । महिलाले खान अस्वीकार गरेपछि अन्सारीले नै पाउरोटी खाएका थिए । खाने क्रममा नाईट्रोसन भने भुइँमा खसाएका थिए । उक्त नाईट्रोसन प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ ।
‘पाउरोटीमा नाईट्रोसन मिसाउँदै महिलालाई खान दिएर नसामा लट्याएर बलात्कार गर्ने योजना पनि बनाएका रहेछन्,’ प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो, ‘महिलाले खान अस्वीकार गरेका कारण उनीहरुको त्यो योजना भने सफल हुन पाएनछ ।’ त्यसपछि रुपमतीकै आफन्त एक युवतीलाई उनीहरुले निशाना बनाएको र त्यो पनि असफल हुँदा घरबाट आमासंग विदा मागेर टिभी हेर्न निस्किएकी रुपमतीमाथि यो घटना हुन पुगेको प्रहरी अधिकारीहरुको भनाइ छ । महिलालाई पाउरोटीमा मिसाएर नाईट्रोसन खान दिएको घटनाले पनि अनुसन्धानमा धेरै ठूलो सहयोग पु¥याएको प्रहरीको भनाइ छ ।
रुपमतीले लगाएको चप्पल भने शव भेटिएकै दिन फेला परेको थियो । घटनामा संलग्नको पहिचान भएर पक्राउ परेपछि भने उनले लगाएका कपडा फेला परेका हुन् । प्रहरीले उनले लगाएको टोपी र कपडा भने सय मिटर आसपासमा मान्छे मर्दा शव जलाउनका लागि प्रयोग गरिने ठाउँमा फेला परेको जनाएको छ । पक्राउ परेकाहरुले नै प्रहरीलाई घटनास्थल र रुपमतीको कपडा फ्यालेको ठाउँ देखाइदिएका हुन् । रुपमतीले लगाएको टोपी, जामा, सुरुवाल लगायतका कपडा बरामद गरिसकिएको प्रहरी भनाइ छ ।
‘हत्या गरेर शव नै खोलामा फ्यालिदिएपछि पानीले प्रमाण नष्ट गरिदिंदा अनुसन्धानमा निक्कै ठूलो तनाव बेहोर्नु प¥यो,’ प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘एक सातापछि भए पनि घटनाको गहिराईसम्म पुग्न सकियो ।’ उनका अनुसार शव पानी भित्र भेटिएको र पानीले घटनाको प्रमाण नष्ट गरिदिंदा अनुसन्धानका लागि सुरुमा कुनै भेउ पाउन सकिएको थिएन ।
पोष्टमार्टम रिपोर्टले पनि बलात्कारपछि नै हत्या भएको पुष्टि गरेको छ । शवको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पोष्टमार्टम गरिएको थियो । अनुसन्धान र पोष्टमार्टम रिपोर्ट मेल खाएपछि तथा हत्यामा संलग्न पक्राउ परेर घटनामा आफूहरुको संलग्नता स्वीकार गरिसकेपछि प्रहरीले घटनाको सबै विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रहरीले लागुऔषधको नसामा रहेका र चिनजानकै व्यक्तिले घटना गराएको हुन सक्ने अनुमान भने गर्दै आएको थियो ।
मानव तस्करीको नयाँ रुट, यसरी तेस्राे मुलुक पुर्‍याइन्छ नेपाली युवतीहरू… हेर्नुहाेस्